Mayelana Nathi - Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd.
I-Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd yasungulwa ngo-2010, iBontai inefekthri yayo egxile ekuthengiseni, ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni zonke izinhlobo zamathuluzi edayimane. Sinezinhlobonhlobo zamathuluzi okugaya idayimane nawokupholisha ohlelo lokupholisha phansi, okuhlanganisa izicathulo zokugaya idayimane, amasondo enkomishi yokugaya idayimane, amadiski okugaya idayimane namathuluzi e-PCD. Izosebenza ekugayweni kwezinhlobonhlobo zikakhonkolo, i-terrazzo, izitezi zamatshe nezinye izitezi zokwakha.
Njengoba kuboniswe emfanekisweni, kuwumsebenzi osembonini yamasondo eNanjing, enendawo ephelele engu-130,000m². I-BonTai ayigcini nje ngokunikeza amathuluzi ekhwalithi ephezulu, kodwa futhi ikwazi ukwenza ubuciko obusha bokuxazulula noma yiziphi izinkinga lapho igaya futhi ipholishwa ezitezi ezihlukahlukene.
Amandla Okuthuthukisa Amandla
Ngolwazi lomkhiqizo ochwepheshe kanye nesistimu yesevisi enhle eqenjini le-BonTai, asikwazi nje ukukuxazululela imikhiqizo engcono kakhulu nekulungele kakhulu, kodwa futhi sikuxazululele izinkinga zobuchwepheshe. Sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Inkampani yethu yaziwa ngekhwalithi yayo ephezulu futhi ibonakala ngokuqina okuhle kakhulu, ukuzinza kanye nokucwebezela okuphezulu kumathuluzi okugaya amadayimane omkhiqizo we-"BTD" namapukhi okupholisha idayimane, amukelwa kabanzi emakethe yasekhaya naphesheya kwezilwandle. Ithunyelwa eMpumalanga naseNtshonalanga Yurophu, eMelika, e-Australia, e-Asia naseMpumalanga Ephakathi kanye nemakethe yomhlaba wonke.
Sihlala sinamathela kufilosofi yebhizinisi "yemikhiqizo emihle, ukugaya okuhle, kanye nobuhle besevisi obujulile". Ngokuthembela ekuhlukaniseni imikhiqizo ngokucophelela, ikhwalithi yomkhiqizo ezinzile, ukuphathwa kwenqubo okuphumelelayo kanye nenkonzo yamakhasimende enhle kakhulu, iye yaqashelwa futhi yathenjwa umphakathi wamakhasimende.
Siqhubeka nokuhlangabezana nezidingo zomuntu ngamunye zamakhasimende ethu, imikhiqizo ehlukanisiwe eyenziwe ngabanye, sithuthukisa inani lemikhiqizo yethu, futhi siqhubeka sidala inani elithe xaxa kumakhasimende ethu. Lwela umphakeli wamathuluzi wedayimane ongcono kakhulu emhlabeni.